Guriga waayeelada - Söderhamns kommun Gamla Webben
| Daryeelka waayeelada
| Guriga waayeelada
Haddii aad u baahan tahay daryeel ka badan kan guriga kuwa daryeelka Guriga waxey ku sii karanboos ka mid ah hoyga howlgabka ah.
Xeerilaaliye maxalli ah ayaa baari doona baahidaada oo go'aan ka gaara haddii aad xaq u leedahay inaad ku noolaato guri dabaq ah.
Dhamaan guryaha hawlgabka waxay leeyihiin shaqaale maalin kasta. Waxaa sidoo kale jira xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka qaabka kalkaaliyayaasha iyo helitaanka physiotherapists dhammaan guryaha hawlgabka.
Guryaha oo idil waxay leeyihiin taleefannada gacanta, teleefishinka TV-ga, digniinta ammaanka iyo sariirta. Haddii kale, kireystuhu wuxuu u gudbiyaa gurigiisa. Qof kasta oo ku nool guriga hawlgabka wuxuu bixiyaa kirada iyo lacag kujrto adeeg iyo daryeel.
Guryaha waaweyni waxay ku kici karaan lacag badan waxayna ku xiran tahay hadba inta uu le'eg yahay guriga iyo inta daryeelka loo baahan yahay. Waxaa jira guriyaal hawlgab oo kala duwan baahida kala duwan.
Guriga adeegga waayeelada
Guryaha adeegga waayeelada Servicehus, dadka aan u baahnayn shaqaale badan ayaa ku nool.
Goobaha adeegga waxay ku yaalaan Björkbacka (Ljusne), Kastanjen (Ljusne), Linden (Bergvik), Enriset (Söderhamn) iyo Åsgården (Söderhamn).
Deganeyaasha kooxeed ee dadka qaba baahida weyn ee daryeelka
Haddii aad u baahan tahay daryeel dheeraad ah oo aad ka heli kartid guryaha adeega, waxaad ku joogi kartaa guri garuub ah oo loogu talagalay dadka leh baahiyo daryeel oo weyn. Halkan waxaa ku diyaarsan shaqaale saacad kasta. Guryaha waxay ku yaalaan Eklunda (Skog), Forsgården (Norrala), Hedbacka Söderala), Björkbacka (Ljusne), Enriset (Söderhamn) iyo Åsgården (Söderhamn).
Dadka degan guryaha dadka waallida qaba
Waxaa jira guryo gaar ah oo loogu talagalay dadka waallida qaba, sida cudurka Alzheimers. Halkan waxaa ay leedahay shaqaale dheeraad ah iyo guryo yar. Guryaha waxay ku yaalaan Eklunda (Skog), Enriset (Söderhamn), Forsgården (Norrala), Hedbacka (Söderala) iyo Kastanjen (Ljusne).
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan la xiriir:
Isniin-Jimco 08:00-16: 30
Telfon: 0270-756 56